July Dream: I'mabaddie
ဘာတွေပြောပြော ခင်ဗျားအသည်းနုနုလေး(စိတ်သဘောထား) ကိုယ်သိတယ်...မာချင်ဟန်ဆောင်နေတာ
လုပ်ပလိုက်ပါ ကိုဂျူလှိုင်။ :D
btw day club အကြောင်း ဟိုရက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လင့် ပေးလို့ mysuboo မှာ ဖတ်ရသေးတယ်။ ရေးသူကလည်း မိန်းကလေးပါပဲ ပြန်တော့ မshare တော့ပါဘူး အချိန်ကုန်စေမယ် ဒါပေမယ့် ရန်ကုန်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ မသိတော့ပါဘူး။
သူရေးထားတဲ့အထဲမှာ ၁၆ နှစ်တောင် ၀င်ရတယ် ဆိုတာပါလို့ပါ။ :)
အော် Day club တဲ့...။ :)
စေတနာတွေ တနေ့ နားလည်လာမှာပါဗျာ..
သူတို့အတွက် နားလည်တဲ့ အချိန်နောက်မကျပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပေးရမှာပေါ့...
BTW , Strike က ကို July အသည်းနုတဲ့ အကြောင်းလည်းသိတာပဲနော်. :P
ကိုဂျူလိုင်ရဲ့ သည်းသည်းနဲ့ ဆိုရင်ကော လူကြမ်းကြီးပဲလား။ :D
စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ ဂျူလိုင်အိပ်မက်ရေ။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ ..ကလောင်နာမည်လေးက ကဗျာဆန်တယ်နော်။ လာလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ကွာ။
"ကျွန်တော် ကြမ်းခဲ့တာတွေဟာ သူတို့အတွက်ပါဆိုတာ သူတို့ သိနားလည်တဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီလူကြမ်းကြီးက သူတို့အနားမှာ ရှိနေအုံးမလားဆိုတာ မသေချာ မရေရာပါဘူးလေ။"
ကိုဂျူ လှိုင် ဒူရင်းသီး က အမြင်ဆိုးတယ် အတွင်း သားကောင်းတယ် ကျနော် လည်း ကျောင်းဆရာ ဘ၀တုံး ကတော့ ဒူရင်း သီးပေါ့ ဗျာ
လူကြမ်းကြီး အတွက် လာဂုဏ်ယူပါတယ်
လူကြမ်းလည်း အကယ်ဒမီရတဲ့ခေတ်ရောက်နေပါပြီ။ ဟဲဟဲ
အမေနဲ့ တူလိုက်တာ... အမေလည်း ကိုဂျုလိုင်လို လူကြမ်းနေရာကပဲ
ကျွန်မကြားဘူးတာတော့ စိတ်ထားကောင်းသူတွေ တော်၂များ အပြောအဆို ကြမ်းကြတယ်လို့ပြောတာပဲ . စေတနာတွေကို ကလေးတွေကနားမလည်လို့ပါ ကိုယ့်နေရာကို ရောက်တဲ့အခါမှကိုယ်ချင်းစာနိုင်မှာပါရှင်.
~~~ညရေ ကိုယ်ဟာလူကြမ်းကြီးပါ~~~အဟား အဟွတ် ဟွတ်
ရောက်တော့ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါမှတော့ ကွန်မန့်မရေးဖူးပါဘူး။ ဒီတစ်ခါပို့စ်ကိုတော့ ကြိုက်တဲ့ အတွက် ရေးလိုက်ပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲနေသူတွေအတွက် အကိုတို့လို လူမျိုးတွေလည်း ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒါမှ ပြန်ပေါင်းစည်းပေးလို့ရမှာ... အဟဲ
ကို July, emotional intellengence ဆိုတာ မသင်ဖူးဘူးထင်တယ်။ ကျွန်မလည်း အရင်က ဒီလိုပဲ သိပ်လူမုန်းများတယ်။ စကားကို ဘယ်အချိန်မှာ ပြောသင့်တယ် ဆိုတာထက် ကိုစေတနာမှန်တာပဲ မှန်တာပြောတာ ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ ကိုယ့်လိပ်ပြာ ကိုယ်လုံတယ်ဆိုပြီး ပြောတာတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မှန်တိုင်း အကျိုးမရှိရင် ကိုယ်ပဲ ခံစားရတယ်။ Case Study တခုနဲ့တွဲပြီးCommunication နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Subject တခုမှာ emotional intellegence ဆိုတဲ့ အမှတ် ၃၀ တန် Assignment တခုကို ကျွန်မ အသဲအသန်ကြိုးစားပြီးလုပ်တာ အောင်မှတ်ပဲရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Assignment ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ကျွန်မတော်တော်လေး လူချစ်လူခင်များလာသလိုပဲ။ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ကို July တိုင်းသိပြည်သိ လူကြမ်းမင်းသားကြီး ဦးအံ့ကျော်တောင်မှ အကယ်ဓမီ ရသေးတာပဲ မဟုတ်လား။
ကိုယ်နဲ့ပက်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ အသိုင်အ၀ိုင်း ဇါတ်ခုံမှာ
လှပတဲ့ ဇါတ်လမ်းလေးတစ်ခု အရောင်ပိုထွက်လာအောင် အဓိက ပံ့ပိုးပေးရတဲ့ လူကြမ်းနေရာမှာ နေခွင့်ရတာ ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ လူကြမ်းမင်းသားရာ...
ကြွရောက်လာကြသော ဘလော့လောက ပရိတ်သတ်များခင်ဗျာ
မလိမ်မိုး မလိမ္မာ ညီမဝမ်းကွဲလေးအပေါ် ကောင်းစေချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ပြောသင့်တာကိုပြော ပြင်သင့်တာကိုပြင် ဆုံးမသင့်တာကို ဆုံးမတတ်လို့ ညီမငယ်ရဲ့ အမြင်မကြည်လင်မှုကို ခံရတဲ့ အကိုအဖြစ်တစ်မျိုး
သူငယ်ချင်း ချစ်သူစုံတွဲတွေကြားက အထင်လွဲမှားမှုတွေကို ချေဖျက်၊ ချစ်ခြင်းတရားတွေ လစ်ဟင်းမသွားအောင် ကြားဝင်စေ့စပ်၊ နွားတွေကို ပလာတာ ကျွေးရက်သူအဖြစ် တစ်ဖုံ
တပည့်တွေကို တော်စေ တတ်စေ ထူးချွန်စေချင်လို့ စည်းကမ်းကို တင်းကြပ် တစ်ကွက်ကလေးမှ မျက်နှာသာမပေး ခပ်ဝေးဝေးနေတတ်တဲ့ ဆရာလေးအဖြစ် တစ်သွယ်
ဘဝဇာတ်ခုံပေါ်က ကျရာဇာတ်ထုပ်ကို သဏ္ဍာန်လုပ် သရုပ်တူအောင် ထူးထူးခြားခြား ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ခဲ့လို့
ဖြောင်း. ဖြောင်း.. ဖြောင်း...
ထန်းပင်ပေါ်က ဆင်းလာပြီး နွားလှည်းနောက် ပြေးလိုက်နေတဲ့ အံ့ကျော်ကြီးတောင် မျက်စေ့ထဲ မြင်လာတယ်။
နောက်ဆုံး စကားလေးကတော့ အထိဆုံးပဲ။
ခုတလော လူကြမ်းလုပ်နေရလို့ ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျို့။
ဟား ဟား ဟား..ကတင ကတော့လုပ်ပြီ....အံ့ကျော်ကြီးခါးတောင်းကြိုက်ပြီး ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့ထန်းပင်တက်သလို JDကိုလဲမြင်ယောင်လာတယ်...
လူကြမ်းလေးကို နားလည်ပါ တဲ့လား။
ဒီလူကြီး ဆူတယ်၊ နားလည်ဘူး။
လူကြမ်းကြီးမျောက်ဖိုးစိန်ရေ .. လင့်ခ်လိုက်ပြီနော် .. စိတ်မဆိုးနဲ့ လိမ်မာတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မျောက်ဖိုးစိန်က ကဏန်းထက်တော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ် ..
အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်တဲ့လူကြမ်းပဲဟာ .. အားပေးနေပါတယ်ဗျို့ .. အမြင်မတော်ရင် ဆုံးမပါ :D
လုပ်သင့်တာပေါ့. ဒါမျိုးလုပ်တာဟာ သူတို့ အတွက် ဆိုတာ တနေ့သိလာမှာပါ။
ကတာဘာဖြစ်လို့လဲဟင်။ ညီမလည်း အက၀ါသနာပါတယ်။ မြန်မာအကရော၊ အင်္ဂလိပ်အကရော၊ ဟစ်ဟော့အကတောင် ၀ါသနာပါသေးတယ်။ အရမ်းခက်လို့သာ။